PHP, SQL,APACHE in ubuntu - MYSTERY ZILLION
PHP, SQL,APACHE in ubuntu
November 2007 edited May 2010 in PHP
I want to run php in my ubuntu...what can i do???
i type lhttp://localhost i see my space that .php and .html.....
when i run html it is ok but
.php have got unknow file types with ? icon....i run it I only got open with.....what is that????
ကိုဖုန်းရေ ကြည့်ရတာ ခင်ဗျား ဥူဗံတူ မှာ အပါချီ ရှိပြီးသားထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Local Host နဲ့ .html extension ကိုကြည့်လို့ရတာပေါ့။
PHP လိုချင်ရင်တော့၊ တစ် Package update လုပ်ရင်လုပ်၊ နှစ် PHP.net ကနေဆွဲချပြီး
ကျွန်နော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်၊ Ubuntu ထဲက Package Manager ထဲ၀င်ပြီး
PHP check box လေးကို check လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ကျွန်တော် မသေချာပါဘူး။ မကိုင်တာကြာလို့မေ့လုပါပြီ။
( What I think is, Php Package is already
contained in Ubuntu installation CD. So you just have to enable it or
check the check box for installation.)
packages.ubuntu.com မှာ PHP5 package တွေကို download ဆွဲချလိုက်ပါ..
အဲဒီ package တွေလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ..
အရင်းဆုံး XAMPP ကို အောက်ကလင့်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ...
ပြီးရင် Console ထဲမှာ ခင်ဗျား Download လုပ်ထားတဲ့ File ရှိနေတဲ့ Direcotory အောက်ကိုသွားပါ..
ဒီအောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ရိုက်ပါ...
sudo tar xzvf xampp-linux-1.6.4.tar.gz -C /opt
ဒါဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ PHP Apache Mysql အားလုံးကို /opt အောက်မှာ Install လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလ ိမ့်မယ်...
ခင်ဗျားရဲ့ Web Document တွေအတွက် Directory က /opt/lampp/htdocs ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
PHP ဖိုင်တွေကို Browser တစ်ခုခုနဲ့ မRunခင် Apache Server ကို အရင် Run ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်
sudo /opt/lampp/lampp start လို့ ရို်က်ပြီး Run ရပါတယ်...
Windows မှာလို စက်စအတက်မှာ Apache Server ကို Automatic Run အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ နောက်ကြုံမှ ထပ်ပြောပါဦးမယ်...
[ stup!x ]
ဟုတ်ပါ့ဟုတ်ပါ့ stupix အကြံကောင်းတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် XAMPP ကိုသုံးနေပြီး။ ပြောပြဖို့မေ့နေတယ်။
/opt is admin right. how can i access ?i can copy my web stuffs into htdocs folder only with command line.but i cannot access from browser(FireFox) my web documents!
here my error >>
If you think this isaserver error, please contact the webmaster ([email protected]).
Wed 12 May 2010 08:44:58 AM EDT
Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.